अब कोरोना भाइरसको डर खत्तम ! संक्रमितको जीवन रक्षक औषधी पत्ता लाग्यो – Himshikharnews.com
अब कोरोना भाइरसको डर खत्तम ! संक्रमितको जीवन रक्षक औषधी पत्ता लाग्यो
३ असार २०७७, बुधबार १०:५५
एजेन्सी । अब कोरोना भाइरसको डर खत्तम हुने भएको छ । संक्रमित गम्भीर विरामी परेपनि जीवन जोगाउने औषधी पत्ता लागेको छ । कम मात्रामा दिइने यो स्टेरोइड औषधी सस्तो र सुलभ पनि छ ।
डेक्सामिथासोन नामको उक्त औषधीले खतरनाक कोरोना भाइरससँग लड्ने क्षमता राख्ने बेलायतका विज्ञहरुले बताएका छन् । यसको परीक्षण भइरहँदा सकारात्मक नतिजा निस्किएको छ । औषधी गम्भीर विरामीलाई नशाबाट र सामान्य संक्रमितलाई चक्कीबाट दिइन्छ । यसले गम्भीर संक्रमितमध्येबाट अब मृत्यु दर घटाएर प्रत्येक तीन जनामा दुई जनालाई बचाउने दाबी गरिएको छ ।
‘यदि यो औषधी बेलायतमा शुरुमै प्रयोगमा ल्याइन्थ्यो भने पाँच हजार जीवन बच्नसक्थ्यो,’ बीबीसीले रिसर्चरहरुको भनाई उदृत गर्दै लेखेको छ । मंगलबार औषधीबारे सार्वजनिक गरिएको छ । अब यसको उपयोगिता र प्रयोगबारे छिट्टै रिसर्चसम्बन्धी जानकारी वृस्तृत रुपमा प्रकाशित गरिनेछ ।
गरिब देशहरुका लागि पनि यो उपयोगी हुने भएको छ । यो सस्तो र सुलभ मूल्यमै उपलब्ध हुन्छ ।
अब बेलायत सरकारले यसको प्रयोग गर्ने जनाइएको छ । डेक्सामिथासोन कोरोना संक्रमित विरामी र भेन्टिलेटर या अक्सिजन दिएर राखिएकाको लागि पनि प्रयोग गरिनेछ ।
अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले डेक्सामिथासोनको २ हजार अस्पतालका बिरामीमा परीक्षण गरेको थियो । औषधीको प्रयोग नगरिएको बाँकी ४ हजारसँग तुलना गरिएको थियो ।
जसबाट भेन्टिलेटरमा भएका विरामीको मृत्युको खतरा ४० देखि २८ प्रतिशत घटायो । अक्सिजन दिइएका विरामीको मृत्युको खतरा २५ देखि २० प्रतिशत घटायो ।
यौ औषधी विश्वभर उपलब्ध हुन्छ । जीवन बनाउन ५ हजार नेपाली रुपैयाँ सम्मको यो औषधी प्रयोग हुन्छ ।